Wesdar K56 Buletooth Speaker (Gold) ~ ICT.com.mm
HomeWesdar K56 Buletooth Speaker (Gold)
Wesdar K56 Buletooth Speaker (Gold)
ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့် မိမိနဲ့အတူ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Wesdar အမှတ်တံဆိပ် K56 Buletooth စပီကာ (ရွှေရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ သေးငယ်ပေမဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Loudspeaker နဲ့ တွဲဘက်ပစ္စည်းတွေကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် တကယ့်ကို သာယာပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သဘာဝအသံအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ စပီကာရဲ့ပြင်ပကိုယ်ထည်ဟာ ၁၉၆၀ ခေတ်များဆီက ကားဆေးသုတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့် ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့တဲ့ ကိုယ်ထည်အထိအတွေ့နဲ့အတူ နှစ်လိုဖွယ်အရောင်အသွေးရဲ့... [Learn more]
ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကြောင့် မိမိနဲ့အတူ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ Wesdar အမှတ်တံဆိပ် K56 Buletooth စပီကာ (ရွှေရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ သေးငယ်ပေမဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Loudspeaker နဲ့ တွဲဘက်ပစ္စည်းတွေကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် တကယ့်ကို သာယာပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သဘာဝအသံအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ စပီကာရဲ့ပြင်ပကိုယ်ထည်ဟာ ၁၉၆၀ ခေတ်များဆီက ကားဆေးသုတ်နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့် ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့တဲ့ ကိုယ်ထည်အထိအတွေ့နဲ့အတူ နှစ်လိုဖွယ်အရောင်အသွေးရဲ့ လှပမှုကို အပြည့်အဝခံစားရစေမှာပါ။ K56 Bluetooth Speaker မှာ FM radio ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာလိုင်းတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သီချင်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို နားဆင်ရင်း အပန်းဖြေနိုင်မှာပါ။ Battery Capacity: 1200mAh ရှိတဲ့ ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အနည်းဆုံး (၄)နာရီမှ (၆)နာရီအထိ တောက်လျှောက် အသုံးပြုနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Classic ဆန်တဲ့ ရွှေအိုရောင် ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ချစ်စဖွယ် Bluetooth စပီကာ တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
Materials: ABS, Bluetooth Version: 4.2+JL, Transmission Distance: 10 m, Unit Size: 45mm 5W, Charging Vlotage: DC 5V, Frequency Response: 120Hz-20KHz, Battery Capacity: 1200mAh, Playing Time: 4-6 hours, Dimension: 122-57*74 mm, Weight: 220g
Enjoy the music feast anytime you want
Being Lightweight and mini size,make it easy and no stress to taking out,and with the high quality loudspeaker accessories,let the voice of the bluetooth speaker full of magnetic sense and beautiful.Moreover,the distortion less than 0.5%,reverting the natural voice.
The lovely color belongs to happier Age
The outside housing of the Bluetooth Speaker is use the car paint process like those of 1960s,fulfill the silk-sense feeling and unique colors.
FM Radio-unchanging feelings
With K56 Bluetooth Speaker,you can listen to music and use FM radio,so that you won't miss you favorite FM channel and also can enjou rock or other style music.